Iikholeji zeeKholeji yaseTexas: Iindleko, iNcedo loScholarships ...
Iingxelo zeeKholeji zaseTexas.
Ikholeji yaseTexas ivuliwe ngokuvakalayo, oko kuthetha ukuba nabanomdla abanomdla nabafanelekileyo bayakwazi ukubhalisa esikolweni. Abafundi abafuna ukuza kusasa kufuneka bathumele isicelo (esingagqitywa kwi-intanethi, okanye kwiphepha). Abafundi baya kufuneka kwakhona ukuba bathumele kwizikolo eziphezulu ezisemthethweni, okanye iirekhodi zeGED. Hlola iwebhusayithi yezikole ngolwazi olungakumbi kunye nezikhokelo malunga nokusetyenziswa.
Inqanaba lokumkela iKholeji yaseTexas: -
Ikholeji yaseTexas ivuliwe
Texas College I nkcazelo:
Eyasungulwa ngo-1894, i-Texas College yiminyaka emine, ikholeji yangasese eTyler, eTexas, idolophu edlalwa ngokuba yi "Rose Capital of the World." I-Dallas iilikhulu leeekhilomitha entshonalanga, kwaye iHouston ibingamakhulu amabini eekhilomitha ukuya ngasezantsi. Ngomnyaka we-1944, yaba yinye yeekholeji zobuncaka bezemveli kunye neeyunivesithi ezizimeleyo ezingama-27 (HBCU) ezihlelwe yi-United Negro College Fund. Ikholeji yaseTexas ibambene neCawa yamaKristu yama-Epistopal Church. Abafundi abayi-1 000 baxhaswa ngumlinganiselo womfundi / ubuchule be-20 ukuya kwe-1. Ikholeji inika iiprogram ze-bachelor degree degree kwii-divisions ze-Natural and Computational Science, i-Education, iBusiness and Social Sciences, kunye ne-General Studies and Humanities.
Amacandelo obugcisa kwizoshishino kunye nolwaphulo-mthetho yizona ziyaziwayo. Abafundi bahlala bekhuthele ngaphandle kweklasi, kuba i-campus iyakha kwikqubo yamaGrike esebenzayo kunye neentlanga ezine kunye neentlanga ezine, iqela elikhethekileyo nelinomncintiswano, kunye nezinye iiklabhu kunye nemibutho. I-Texas College Steers incintisana kuMbutho weSizwe we-Intercollegiate Athletics (NAIA) njengelungu leNgqungquthela yoMlambo oyiRed (RRAC) kunye ne-Central States Football League (CSFL).
Iikholeji zeekholeji zamadoda amahlanu kunye neentlanu zezemidlalo zabesifazane abahlanu.
Ubhaliso lwabonke: 960 (bonke abagqwesileyo)
Ukuphazamiseka kwesini: 58% Amadoda / 42% Abafazi
Imfundo kunye neMali: $ 10,008
Iincwadi: i-$ 2,300 ( kutheni uninzi? )
Iindleko ezipheleleyo: $ 21,008
I-Texas College yezeNkxaso yezeMali (2015 - 16):
Izibonelelo: $ 5,007
Imali: $ 5,565
I-Popular Majors: I- Biology, uLawulo lwezoShishino, ubulungisa boLwaphulo-mthetho, iMfundo, uLuntu loLuntu, uLuntu
Ireyithi yokudlulisa: 45%
Ireyithi yoNyaka weSifundo seMinyaka eyi-6: 18%
Imidlalo Yezemidlalo: Ibhola, Ibhola, iBhola yebhola, iBhola leMidlalo, Umkhondo kunye neNgingqi
Ezemidlalo zaBasetyhini: I- Volleyball, iChola, iBhola yeBhola, i-Track and field, iSoftball
Ukuba Uthanda i-Texas College, Unokuthi Ungathanda Ezi Zikolo:
YaseTexas Southern University
I-Prairie Jonga iYunivesithi ye-A & M
IYunivesithi yase-Texas A & M
UStephen F Austin State University
University of Christian Texas
University of Texas State University
IWest Texas yaseYunivesithi ye-A & M
I-Oregon State University Admissions
I-Wake Forest University Yamkelwa
IYunivesithi yase-Southern Maine Admissions
I-Ohio Northern University
I-Griffin kwi-Architecture kunye noyilo
Igalari yeMfihlakalo yabantu kunye neeAnomali
Iishedyuli zoVavanyo zabaFundi abakhubazekileyo
Iintsingiselo ze "Izikhalazo"
Imikhosi yeBar Mitzvah kunye neNkcubeko
Apho Amagosa Asebenza?
Iingcebiso zootitshala ukuba benze izigqibo zokuQala ukuQala
Uhlobo oluthile loPhuculo lweBhayisikili
I-MySQL Tutorial: Ukulawula idatha ye-MySQL
Ukoyika iNkosi: Isipho soMoya oyiNgcwele
Isisombululo esisisiseko Inkcazo
Iimfuno zeJapane ezisebenzayo